'राजा' ज्ञानेन्द्रलाई उपचार गर्न विदेश नै जानुपर्छ भन्ने ज्ञान किन नआएको होला ?
भारत या चीनसँग हदैसम्म झुकेको भए कतै राजसंस्था बची पो हाल्थ्यो कि ?
२०७६ श्रावण १५ बुधबार
काठमाडौं, बिरामी त 'राजा' ज्ञानेन्द्र पनि हुँदा हुन् । उनकी वृद्ध आमाको स्वास्थ्य पनि त्यत्ति राम्रो छ भन्ने सुनिन्न । तर तिनलाई उपचार गर्न विदेश नै जानुपर्छ भन्ने ज्ञान किन नआएको होला ?
साभार: https://www.facebook.com/ngaunle/posts/10211210525817327 नारायण गाउँलेको फेसबुक बाट